Counter-tracking တန်ပြန်စစ်ဆေးခြင်း | Rieter Professional Credit Bureau
Rieter ၏ဆန့်ကျင်မှုနှင့်စစ်ဆေးမှုဆန့်ကျင်ရေး ၀ န်ဆောင်မှုများမိတ်ဆက်
တရားစွဲဆိုမှု၏အောင်မြင်မှုကိုရရှိရန်အတွက်အထွေထွေခရက်ဒစ်ဗျူရိုအတွက်အရေးအကြီးဆုံးအချက်မှာသက်သေအထောက်အထားများရှာဖွေရန်နှင့်စုံစမ်းစစ်ဆေးရန်ဖြစ်သည်။ သို့သော်ခရက်ဒစ်ဗျူရိုတွင်လည်းချေးငွေဆန့်ကျင်မှုဟုခေါ်သည်။ ရည်ရွယ်ချက်မှာသင်၏ကုမ္ပဏီနှင့်လူများကိုအလှည့်ကျစုံစမ်းစစ်ဆေးရန်ဖြစ်သည်။ ဤလူမှုရေးမငြိမ်မသက်မှုများခေတ်တွင်အခြားသူများ၏အားနည်းချက်များကို အသုံးပြု၍ ထောင်ချောက်များ၊ နတ်သမီးပုံပြင်ခုန်မှုများ၊ အခြားသူများ၏အားနည်းချက်များကို အသုံးပြု၍ တိုက်ခိုက်ခြင်းများသို့မဟုတ်သင့်အားနောက်ကွယ်မှသက်သေအထောက်အထားများကိုလျှို့ဝှက်ရှာဖွေ။ ပင်သင့်အားတရားမ ၀ င်အရေးယူမှုများသို့မဟုတ်သင့်အားတရားစွဲရန်ပြင်ဆင်မှုများရှိသည်။ ဤအဖြစ်အပျက်သည်အဆန်းမဟုတ်ဘဲသင့်အတွက်ဤကပ်ဘေးများကိုသင်မထိန်းချုပ်သင့်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ anti-tracking နှင့် anti-စုံစမ်းစစ်ဆေးရေး၏ရည်ရွယ်ချက်ဖြစ်သည်။
ကျွမ်းကျင်သောသိပ္ပံနည်းကျကိရိယာများသည်အိမ်များနှင့်ကားများကို pinhole ကင်မရာများ၊
လက်ကိုင်ဖုန်းများနှင့်ဒေသတွင်းခေါ်ဆိုမှုများကိုစောင့်ကြည့်နေမနေစစ်ဆေးပါလူအများစုကသူတို့ဖုန်းကိုအသာပုတ်ခြင်းရှိ၊ မရှိသိလိမ့်မည်မဟုတ်ဘဲ၎င်းသည်သင့်အားအရာရာအားလုံးကိုအကျိုးသက်ရောက်စေသည်။ Rieter Credit Bureau ၏အထူးပြုသည်သင်၏အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုဖြစ်သည်။
ယာဉ်တစ် ဦး positioning ကိုစနစ်တပ်ဆင်ထားရှိမရှိနေရာချထားခြင်းစနစ်၊ မည်သည့်နေရာတွင်တပ်ဆင်ထားသည်ကိုသင်သိပါသလား၊ မည်သူသည်သင့်အားစုံစမ်းစစ်ဆေးနေသည်ကိုသင်သိလိုပါသလား၊ သို့ဖြစ်လျှင် Rieter Credit Bureau မှသင်၏ပြconcernsနာများကိုဖြေရှင်းပေးပါ။
ခြေရာခံခံရဖို့ရှိမရှိသင်လမ်းပေါ်တွင်လျှောက်သွားလျှင်နောက်ကွယ်မှရုတ်တရက်မြင်ကွင်းပိုထွက်လာနိုင်သလားသင်နောက်သို့လိုက်နေခြင်းဖြစ်နိုင်သည်။ ၎င်းကိုသင်မည်သို့တားဆီးနိုင်သနည်း၊ ၎င်းကိုသင့်အားကူညီပေးရန်ကျွန်ုပ်တို့၏ကျွမ်းကျင်သောအဖွဲ့သို့ထားခဲ့ပါ။
သင့်ကိုခြေရာခံခြင်းနှင့်စုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်းခံနေရသည်ဟုသင်သံသယရှိပါကခြေရာခံသူမည်သူမည်ဝါဖြစ်ကြောင်းနှင့်နောက်ခံအကြောင်းရင်းကိုစစ်ဆေးရန်လိုအပ်သည်။ အရေးအကြီးဆုံးအချက်မှာစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုအတွက်ခရက်ဒစ်အေဂျင်စီကိုရှာဖွေရန်ဖြစ်သည်။ နောက်ဆက်တွဲစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုအတွေ့အကြုံနှင့်စစ်ဆေးမှုကိုဆန့်ကျင်။ စစ်ဆေးခြင်းကိုပြုလုပ်ပါ။ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအန္တရာယ်ကိုဖော်ထုတ်ရန်နှင့်အခြားပါတီ၏ရည်ရွယ်ချက်ကိုဆန့်ကျင်။ အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုဖော်ထုတ်ရန်လွယ်ကူသည်။ ရဲကိုအစီရင်ခံရန်သို့မဟုတ်တန်ပြန်ရန်တရားစွဲဆိုမှုအတွက်သက်သေအထောက်အထားများကိုသိမ်းထားရမည်။ စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးခြင်းစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုသည်မသိသောပစ်မှတ်ဖြစ်သော်လည်းဖောက်သည်များ၏ယုံကြည်မှုကိုရရှိရန်လုံလောက်သောတရားဝင်ခရက်ဒစ်ဗျူရိုသည်မည်သူသည်သင့်အားခြေရာခံ။ စောင့်ကြည့်နေကြောင်းသိရှိရန်နှင့်သူတို့၏လုပ်ရပ်များသည်သင့်အားအန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်မှုရှိမရှိစစ်ဆေးရန်ကြိုးစားသည်။
စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုဆန့်ကျင်ခြင်းနှင့်စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုဆန့်ကျင်ရေး ၀ န်ဆောင်ခများ -
စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုဆန့်ကျင်ရေးနှင့်စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးဆန့်ကျင်ရေး ၀ န်ဆောင်ခများ - ပစ္စည်းကိရိယာများနှင့်ကျွမ်းကျင်မှုအတွေ့အကြုံ၊ လူစွမ်းအားများအကူအညီဖြင့်၊ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာသီးသန့်တည်ရှိမှုအားချိုးဖောက်ခြင်းရှိ၊ မရှိစစ်ဆေးခြင်း၊ အမှားရှာဖွေခြင်း / အမှားများတပ်ဆင်ခြင်း / အမှားများတပ်ဆင်ခြင်း၊ မည်သူလှည့်စားနေသည်ကိုရှာဖွေရန်။
အိမ်ပတ်ဝန်းကျင်နှင့်ပတ် ၀ န်းကျင်များအားအကြွေးများဖြင့်ထိန်းချုပ်ခြင်း၊ တပ်ဆင်ခြင်းနှင့်စောင့်ကြည့်ခြင်း၊ စောင့်ကြည့်ခြင်းစသည်တို့ရှိမရှိနားလည်ပါ။
စီမံကိန်းစနစ် - ပါတီများ၏အခြေအနေကိုသိရှိပြီးနောက်၊ လိင်တူချင်းချစ်သူစစ်တမ်းများကိုကောက်ယူခြင်းနှင့်လိင်တူချင်းမခွဲခြားနိုင်ခြင်းအခြေအနေရှိမရှိကိုအတည်ပြုရန်မည်သည့်နေရာတွင်ရှိသည်။
အစီရင်ခံစာဆန့်ကျင် အမှုဖြစ်နိုင်သည်အဖြစ် 14 ~ 20 အလုပ်လုပ်ရက်များ ပတ် ၀ န်းကျင်ဘ ၀ တွင်ခရက်ဒစ်နည်းဖြင့်နှောင့်ယှက်ခံနေရသည့်ပြproblemsနာများရှိမရှိကိုနားလည်ရန်နှင့်နည်းလမ်းကိုအကောင်အထည်ဖော်ရန်နည်းလမ်း TWD 10,000 မှ TWD 50,000 အတွက်ကုန်ကျစရိတ်ကိုရှာဖွေပါ။
Anti-pinhole အမှုဖြစ်နိုင်သည်အဖြစ် 1 အလုပ်လုပ်ရက်များ ပတ် ၀ န်းကျင်ပတ် ၀ န်းကျင်ကိုတွင်းပေါက်များနှင့်ထည့်သွင်းထားခြင်းရှိမရှိစစ်ဆေးရန်အတွက်ကျွမ်းကျင်သောပစ္စည်းကိရိယာများနှင့်အတွေ့အကြုံများကို သုံး၍ TWD 3000 မှ TWD 8000 ကုန်ကျသည်။
နားထောင်ခြင်းဆန့်ကျင် အမှုဖြစ်နိုင်သည်အဖြစ် 1 အလုပ်လုပ်ရက်များ ပတ်ဝန်းကျင်ရှိပစ္စည်းကိရိယာများကိုစောင့်ကြည့်လေ့လာရေးကိရိယာများတပ်ဆင်ထားခြင်းရှိမရှိစစ်ဆေးရန်ကျွမ်းကျင်သောပစ္စည်းကိရိယာများနှင့်အတွေ့အကြုံများကို အသုံးပြု၍ TWD 3000 မှ TWD 8000 ကုန်ကျသည်။
နားထောင်ခြင်းဆန့်ကျင် အမှုဖြစ်နိုင်သည်အဖြစ် 1 အလုပ်လုပ်ရက်များ ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ပစ္စည်းကိရိယာများ၊ ဆော့ဖ်ဝဲများနှင့်အတွေ့အကြုံများကို အသုံးပြု၍ ဖုန်းကိုစောင့်ကြည့်ခြင်း၊ စပိုင်ဝိုင်းသို့မဟုတ်ဟာ့ဒ်ဝဲပစ္စည်းများနှင့်လိမ်လည်ခြင်းတို့ရှိမရှိစစ်ဆေးပါ။ ကုန်ကျစရိတ်မှာ TWD 5000 မှ TWD 20000 ဖြစ်သည်။
Anti- ခြေရာခံ အမှုဖြစ်နိုင်သည်အဖြစ် 1 အလုပ်လုပ်ရက်များ လူအင်အားပြင်ဆင်မှုနှင့်ပစ္စည်းကိရိယာအကူအညီများမှတစ်ဆင့်၎င်းကိုခြေရာခံနေ၊ မနိုင်ကိုသိရန်နှင့်အခြားအဖွဲ့ကိုနောက်ပြန်လှည့ ်၍ ၎င်း၏ရည်ရွယ်ချက်နှင့်နောက်ခံကိုနားလည်ရန်အတွက်ကုန်ကျစရိတ်မှာ TWD 20000 မှ TWD 80000 ဖြစ်သည်။
ကားကိုခြေရာခံ / စက်ခေါင်းခြေရာခံ အမှုဖြစ်နိုင်သည်အဖြစ် 1 အလုပ်လုပ်ရက်များ ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ပစ္စည်းကိရိယာများနှင့်အတွေ့အကြုံများအားဖြင့်ယာဉ်ကို tracker ဖြင့်တပ်ဆင်ထားရှိမရှိစစ်ဆေးပါ၊ TWD 3000 မှ TWD 8000 ကုန်ကျသည်။
စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုဆန့်ကျင်ရေးနှင့်စစ်တမ်းကောက်ယူခြင်းဆိုင်ရာ ၀ န်ဆောင်မှုစျေးနှုန်းကုဒ်သည်ရှုပ်ထွေးမှုနှင့်အခက်အခဲပေါ် မူတည်၍ ကွဲပြားသည်။ အမှုသည်သက်ဆိုင်မှုရှိမရှိဆုံးဖြတ်ရန်စီးပွားရေး ၀ န်ထမ်းများနှင့် ကျေးဇူးပြု၍ စစ်ဆေးပါ။
စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုဆန့်ကျင်ရေးနှင့်စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးဆန့်ကျင်ရေးစွဲချက်များသည်အဓိကအားဖြင့်ကားနှင့်မြင်းခများ (ရေနံ၊ အစုလိုက်အပြုံလိုက်ဖြတ်သန်းသွားသည့်လက်မှတ်ခ၊ အဝေးပြေးလမ်းခရီးခ၊ ခရီးသွားလာစရိတ်များ၊
Anti- ခြေရာခံနှင့် anti- စစ်တမ်းလျှောက်လွှာ
မိမိကိုယ်ကိုသို့မဟုတ်မိသားစုဘေးကင်းလုံခြုံမှုနှင့် privacy ကိုချိုးဖောက်မိလိမ့်မည်ကိုစိုးရိမ်သည်။
ပြိုင်ဘက်တစ် ဦး သည်ကုမ္ပဏီ၏လျှို့ဝှက်ချက်များကိုမလျော်ကန်သောနည်းများဖြင့်ခိုးယူလိမ့်မည်။
နူးညံ့သိမ်မွေ့။ ချစ်စရာရည်းစား၏ "ဆန္ဒ" သည်အလွန်ပြင်းထန်သည်
အစဉ်အဆက်အငြင်းပွားမှုများနောက်ဆက်တွဲဖို့ ဦး ဆောင်လမ်းပြ
သူ၏တည်နေရာကိုဖော်ထုတ်ခဲ့သည်! Anti- ခြေရာခံခြင်းတန်ပြန်စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးတရားခံတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်
Anti- ခြေရာခံခြင်းမှတဆင့်သူကသူ့ကိုယ်သူခြေရာခံအရာဝတ္ထုကိုလည်းအကြွေးဗျူရို၏ counterpart ခဲ့ကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့သည်!
အချိန်ကြာမြင့်စွာအခြားသူများအားဖြင့်နောက်တော်သို့လိုက်, နောက်လိုက်များ၏ဝိသေသလက္ခဏာဖြစ် ... ထွက်လှည့်?
သမိုင်းမှာအရင်းအမြစ်အရှိဆုံး! ခြေရာခံခြင်းမပြုမီ anti-tracking ကိုယူပါ၊
ခြေရာခံအပြုအမူလျစ်လျူရှု Stop! အတူတူ tracker ချွတ် Fight!
မင်းဘယ်လိုပြန်ပြောင်းနေလဲ Rieter ခရက်ဒစ်ဗျူရိုကသင့်ကိုသင်ပေးသည်။
ကြောက်မက်ဘွယ်သောသူတစ် ဦး အားဖြင့်နောက်လိုက်! Anti- ခြေရာခံသူမ၏ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်!